Amụma nzuzo - Uniproma-Mgbe Chemistry na-arụ ọrụ
Nlekọta Onwe na Homelọ
Natural UV nzacha
Chemical UV Nzacha
Nkịtị UV Nzacha
Anwụ na-acha na Sunless
Ndị na-egbochi ịka nká
Ndị na-elekọta mmadụ
Ndị ọrụ mmuta / Emulgators
Gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ọchịchị
Ebe Gburugburu Anyị
Uniproma na-asọpụrụ ma na-echebe nzuzo nke ndị ọrụ niile nke ọrụ ahụ. Iji nye gị ọrụ ndị ziri ezi na nkeonwe, uniproma ga-eji ma gosipụta ozi nkeonwe gị dịka ndokwa nke iwu nzuzo a. Mana uniproma ga eji nlezianya na akọ mee ihe banyere ozi a. Ewezuga otu esi nye iwu nzuzo a, uniproma agaghị egosiputa ma ọ bụ nye ndị ọzọ ozi dị otú ahụ na-enweghị ikike gị. Uniproma ga-emelite iwu nzuzo a site n'oge ruo n'oge. Mgbe ị kwenyere na nkwekọrịta ọrụ uniproma, a ga-ewere gị na ị kwenyere ọdịnaya niile nke iwu nzuzo a. Iwu nzuzo a bụ akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta ọrụ uniproma.
1. Akụkụ nke ngwa
a) Mgbe ị na-eziga ase mail, ị kwesịrị ị na jupụta na ina ọmụma dị ka ase ozugbo igbe;
b) Mgbe ị gara na websaịtị nke uniproma, uniproma ga-edekọ ozi nchọgharị gị, gụnyere ma ọnweghị oke na ibe mbata gị, adreesị IP, ụdị ọnụ, mpaghara, ụbọchị na oge ịbịaru, yana ndekọ weebụ ị chọrọ;
Understand ghọtara ma kwenye na ozi ndị a anaghị emetụta na Iwu Nzuzo a:
a) The isiokwu ozi na i tinye mgbe eji search ọrụ nyere site uniproma website;
b) Ihe omuma ihe omumu ajuju nke anakpoputara site na uniproma, tinyere ma obughi oke na ntinye aka, ozi ahia na ihe nyocha;
c) Imebi iwu ma obu iwu uniproma na omume nke uniproma megidere gi.
2. Iji ozi eme ihe
a) Uniproma agaghị enye, ree, gbazite, kesaa ma ọ bụ zụọ ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ na-enweghị njikọ, belụsọ site na ikike izizi gị, ma ọ bụ na ndị ọzọ na uniproma dị iche iche ma ọ bụ na-ejikọ aka na-enye gị ọrụ, na mgbe njedebe nke ọrụ, a ga-amachibido ha ịnweta ụdị ozi niile, gụnyere ndị enwere ike ịnweta ha na mbụ.
b) Uniproma anaghi ekwe ka ndi nke ato ichikota, dezie, ire ma obu igbasa ozi nkeonwe gi n'uzo obula. Ọ bụrụ na achọtara onye ọrụ webụsaịtị ọ bụla uniproma itinye aka na ọrụ ndị a dị n'elu, uniproma nwere ikike ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ ya na onye ọrụ dị otu a ozugbo.
c) Maka ebumnuche nke ijere ndị ọrụ ozi, uniproma nwere ike inye gị ozi ị nwere mmasị na ya site na iji ozi nkeonwe gị, gụnyere mana ọnweghị oke iji zitere gị ozi ngwaahịa na ọrụ, ma ọ bụ ịkekọrịta ozi na ndị mmekọ uniproma ka ha wee zitere gị ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ ha (nke ikpeazụ chọrọ nkwenye gị).
3. Nkwuputa ihe omuma
Uniproma ga-egosiputa ihe niile ma obu ozi nkeonwe gi dika ochicho obi gi ma obu ihe iwu kwadoro n’udi ndi a:
a) Ikpughepu onye ozo site na nkwenye gi mbu;
b) Iji nye ngwaahịa na ọrụ ịchọrọ, ị ga-ekekọrịta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ;
c) Dabere na iwu dị mkpa nke iwu ma ọ bụ ihe chọrọ nke ngalaba nchịkwa ma ọ bụ ikpe, gosipụta ndị ọzọ ma ọ bụ ngalaba nhazi ma ọ bụ ikpe;
d) Ọ bụrụ n ’imebi iwu na ụkpụrụ dị mkpa nke China ma ọ bụ nkwekọrịta ọrụ uniproma ma ọ bụ iwu dị mkpa, ịkwesịrị igosipụta ndị ọzọ;
f) Na azụmahịa emere na webụsaịtị uniproma, ọ bụrụ na ndị ọzọ na azụmaahịa ahụ emezuola ma ọ bụ mezuo iwu azụmaahịa ma rịọ maka ngosipụta ozi, uniproma nwere ikike ikpebi ịnye onye ọrụ ihe ọmụma dị mkpa dịka kọntaktị ahụ ozi nke onye ọzọ iji kwado mmezu nke azụmahịa ma ọ bụ mmezi nke esemokwu.
g) Ngosiputa ndi ozo nke uniproma na-eche na o kwesiri dika iwu, ntuziaka ma obu atumatu weebụsaịtị.